Zidane iyo Ronaldinho oo hoggaaminaya 11 xiddig oo uu ku hungoobay Sir Alex Ferguson | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Zidane iyo Ronaldinho oo hoggaaminaya 11 xiddig oo uu ku hungoobay Sir Alex Ferguson
Zidane iyo Ronaldinho oo hoggaaminaya 11 xiddig oo uu ku hungoobay Sir Alex Ferguson
Posted by: Ahmed Haadi February 8, 2019
Sir Alex Ferguson ayaa dhowr ciyaaryahan oo ugu fiican adduunka dalab u gudbiyey intii uu joogay Manchester United oo uu ku qarash garreeyay 27 sanno.
United ayaa si joogta ah uga mid ahayd kooxaha ugu fiican Yurub muddadaas oo dhan, sidaasi darteed dabcan waxaa jiri ciyaartoy dhowr ah oo uu doortay in uu lasoo saxiixdo.
Halkan Radio Himilo ayaa kugu soo gudbineysa tiro ciyaaryahanno ah oo uu dalbaday Fergusen kuwaasi oo aan u kala qaadi doono saf 11 ciyaaryahanno ah iyo keydka.
United ayaa u dhaqaaqday goolhaye ka hor inta uusan saxiixin Edwin van der Sar oo ay kala soo saxiixdeen Fulham, laakiin waxa ay ku dhawaadeen in ay lasoo saxiixdaan Petr Cech.
“Waa run in Manchester United ay i dooneyso. Laakiin waqtigan muhiim iima ahan. “Waxaan heystaa qandaraas, waan ku faraxsanahay magaalada iyo Real Madrid. Ma aqaan haddii naadiyada ay hadlayaan.
“Marka uu yimaado heshiis, waan ku biiri doonaa. Sir Alex Ferguson ayaa iiga sheekeeyay marar badan waxaana ogahay in aan ahay ciyaaryahan aan jeclahay. “Carlos ayaa sheegay 2002-dii intii uu joogay Real Madrid.
Daafaca Real Madrid iyo xulka qaranka France ayaa qeyb ka ahaa xiddigo uu ku hungoobay hoggaamiyihii hore ee United Fergie, isaga oo sannadkii 2011 u dhaqaaqay kooxda Real Madrid.
Mashalaayihii hore ee kooxda Milan iyo qaranka Italy waa mid kamid ah laacibiin uu isku dayey in uu lasoo saxiixdo tababare Ferguson balse aysan suura gal noqon, mar uu isku dayey helitaankiisa ayey aheyd sidan.
“Waan isku dayay laakiin, markii aan la kulmay aabihiis (Cesare), wuxuu ahaa mid aad u adag,” ayuu yiri Sir Alex. “Anigu waxaan ruxay madaxa, waana iska caadi. Waxa uu igu yiri ‘awoowe waa Milan, aabahay waa Milan, waxaan ahay Milan, wiilkeyana waa Milan … iska ilow! “
Daafac adag, kabtan geesi ah iyo aragti waliba oo aad ku tilmaami karto, laakiin Zanetti ayaa si aad ah loola xiriirinayay in inuu ku biiro United, laakiin heshiiskaasi marnaba ma uusan dhicin.
“Waxaan mar kaliya ku arkay Alex Ferguson garoonka diyaaradeyda markii aan joogay England aniga iyo xaaskeyga,” Zanetti ayaa yiri kaddib markii uu fariistay.
“Waxaan ka wada hadalnay wax ku saabsan kubadda cagta, laakiin mar walba waxaa diiradda ii saarnaa sii joogista Inter, xitaa sannadahan adag.
“Ma aheyn kaliya Manchester United, waxaa jiray kooxo kale oo waa weyn oo dalab ii soo gudbiyey, laakiin jaceylka aan u qabo Inter ayaa mar walba qeexaya miisaanka.”
United ayaa ku dhawaatay in ay lasoo saxiixato Ronaldinho 2003dii markii uu ka tagay Paris Saint-Germain.
“Waxay ahayd arrin 48 saacadood ah,” ayuu u sheegay FourFourTwo markii la weydiiyay sida uu ugu dhowaaday inuu ku biiro United.
“Laakiin Sandro Rosell ayaa ii sheegay kahor arrinkaan :’Haddii aan noqdo madaxweynaha Barca, ma imaan doontaa?’ anniguna Waxaan ku dhahay haa.
Red Devils ayaa fursad u heysatay inay lasoo saxiixato Essien siddeed sanno ka hor inta uusan Chelsea u ciyaarin 2005-tii markaasi oo uu laacibka reer Ghana uu ka tirsanaa FC Bastia.\_
Ku guuleysthii koobka adduunka 1998-kii waxa uu kamid ahaa xiddigo uu isku dayey in uu lasoo saxiixdo tababare Alex Ferguson sannadkii 1996-kii balse uu ku guuldareystay.
United ayaa fursad u heysatay inay lasoo saxiixato Gareth Bale intii uu ku sugnaa Southampton, laakiin Spurs ayaa ku qaadatay dalab 5 milyan oo ginni, Ferguson ayaana xilligaa u arkayey inay aad u badan tahay.
Sir Alex Ferguson ayaa shaaca ka qaaday in kooxda ay isku dayday in ay lasoo saxiixato mid ka mid ah weeraryahanada ugu weyn taariikhda kubadda cagta.
“Waxaan dooneynay in aan lasoo saxiixano weeraryahanka reer Brazil oo xilligaasi ka tirsanaa Cruzeiro sannadkii 1994-kii ayuu yiri Ferguson.
Ferguson ayaa isku dayay lasoo saxiixashada Kaka iyo walaalkiis Digao oo xilligaasi kamid ahaa dhallinyarada Milan.
“Markii uu doonayay in uu la saxiixdo aniga iyo walaalkay inta aan ku jirnay Milan,” Kaka ayaa yiri Ferguson, “Laakiin waxaan dooranay in aan sii joogo kooxda .” ayuu yiri Kaka oo ka hadlayey Ferguson
Xiddigaha keydka: Raul, Paul Gascoigne, Didier Drogba, Sergio Aguero, Thomas Muller, Alan Shearer, Frank Lampard.
Previous: Maqal:- Casharka Tafsiirka Qur’aanka Idaacadda Himilo “Darsiga 293aad”
Next: Maqal:- Barnaamijka bandhiga dhaqaalaha